सबै युग देखि सम्झना गर्न6साहित्यिक पोस्टमेन वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | विज्ञान कल्पना, किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास
केहि दिन अघि म समीक्षा गर्दै थिए केहि उपन्यासहरू जुन शायद हामीलाई थाँहा थिएन ती इप्सितहरू थिए। ठिक आज, महिना अन्त्य गर्न, मैले यी अन्य6तारालाई उद्धार गरें पोष्टमेन, पेशा जुन सधैं निश्चित थियो रोमान्टिक हेलो कि साहित्य को कसरी फाइदा लिन थाहा छ। पछि क्लासिक्स अमर सम्म भविष्यका कथाहरू वा को कालो आवेग। यी शीर्षकहरू हेरौं। निश्चित रूपमा हामीमध्ये केही यस छुट्टीको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ जुन एक भन्दा बढि सुरू हुन गइरहेको छ।
1 बगदाद पोस्टम्यान
3 नेरुदाको हुलाकी
5 हुलाकी हुनुहोस् जहिले पनि दुई पटक कल गर्दछ
6 मिगुएल स्ट्रोगोफ
मा पोष्ट गरिएको 2007, गालिसियन लेखकको यो कथा मार्कोस सान्चेज काल्भेरियो XVIII को विजेता थियो डेल्टा विंग बाल साहित्य पुरस्कार। बाट बच्चाहरूको लागि सिफारिस गरिएको 10 वर्ष.
यो सेट गरिएको छ Bagdadयुद्धको बिचमा। तर, त्यो भए पनि, इब्राहिम उसले आफ्नो मोटरसाइकलमा मेल पठाउन जारी राख्छ। केवल एक दिनaरहस्यमय पत्र कि इब्राहिम कुनै कुरा के वितरित गर्न चाहानुहुन्छ।
यो पहिलो उपन्यास थियो चार्ल्स बुकोवस्की। पहिलो शीर्षक जहाँ उनले आफ्नो चिनो लगाइएको र व्यक्तिगत आत्मकथा शैली सुरु गरे र आफ्नो नायक प्रस्तुत गरे, र अहम् परिवर्तन गरे, चिनस्की। यो थियो कि बाह्र वर्ष गणना गर्नुहोस् सीडी पोष्ट अफिसमा क्लर्क एन्जिल्स को। Job of वर्षको उमेरमा उनले आफूलाई रोजगारको लागि समर्पित गरे।
अनुवाद गरिएको Languages ​​25 भाषाहरू, यो उपन्यास प्रकाशित भयो 1985 चिली लेखक द्वारा एन्टोनियो स्कर्मेटा यो पहिले नै साहित्यको क्लासिक हो। र धेरै पछि उनको १ 1994 XNUMX film मा फिल्म संस्करण.
यसमा उनले हामीलाई कथा बताउँछन् मारियो जिमेनेज, एक जवान माछावाला जसले इस्ला नेग्राको लागि पोष्टम्यान बन्नको लागि आफ्नो व्यापार त्याग्न निर्णय गर्दछ। त्यहाँ एक मात्र व्यक्ति जसले पत्राचार गर्छ र कविता पठाउँदछ कवि हो पाब्लो नेरुडा, जसलाई मारियो धेरै धेरै प्रशंसा गर्दछ। हुलाकीले आशा राख्छ कि एक दिन नेरुदाले उनीलाई एउटा किताब समर्पित गरे वा एउटा शब्दकोष भन्दा बाहिर केहि हुनेछ। र साँच्चै तपाइँको प्रतीक्षा को एक को इनाम हुनेछ धेरै विशिष्ट सम्बन्ध दुबै बीच।
पोस्ट- apocalyptic छोटो उपन्यास अमेरिकी लेखक द्वारा लेखिएको डेभिड ब्रिन १ 1985 XNUMX मा प्रकाशित भएको थियो। यो तेस्रो विश्वयुद्ध पछि, XXI शताब्दीमा ओरेगन राज्य मा लिन्छ।
गोर्डन क्रेन्टेज, एक पूर्व सैनिक जो द्वन्द्वको अन्त्य देखि भटकदै छ, संयुक्त राज्य हुलाक सेवा को लागी एक पूर्व डाकवालाको शव भेटियो। गार्डनले योद्धाहरुले धम्की दिएका छरिएका जनसंख्यालाई आशा प्रदान गर्ने अभिप्रायले आफ्नो पद लिनेछन्।
एक फिल्म संस्करण बनेको थियो 1997 कसले तारांकित गरे केविन Costner.
हुलाकी हुनुहोस् जहिले पनि दुई पटक कल गर्दछ
क्लासिकको क्लासिक यो सम्मानित उत्तर अमेरिकी लेखकको शीर्षक जेम्स एम कैन, जुन रेमंड चण्डलर र Dashiell ह्यामेटको साथ कालो विधाको सम्पूर्ण पवित्र ट्रिनिटीको रूपमा रहेको छ। र पक्कै दुई फिल्म संस्करण को प्रसिद्धि आफ्नो लिखित मौलिक भन्दा ठूलो छ। दुबै त्यो अविस्मरणीय छ 1946संग जोन गारफिल्ड y लाना टर्नरर 1981संग ज्याक निकोल्सन y जेसिका लेन्जे। यो १ 1934 .XNUMX मा प्रकाशित भएको थियो र यसको कथानक को पराकाष्ठा हो सबै भन्दा रोकिने जुनून, लोभ र असीम झूट.
फ्रान्क कक्षहरू, एक बेरोजगार ग्लोबोट्रोटर, हामीलाई पहिलो व्यक्तिको लागि उसको उत्कट चाहनाको बारेमा बताउँछ Cora papadakis, क्यालिफोर्नियामा एक मधुशाला स्वामित्व प्राप्त ग्रीक मूल को एक आप्रवासी को पत्नी। बन्ने द्वारा प्रेमीहरु आर्द्र र महत्वाकांक्षा द्वारा संयुक्त, तिनीहरू योजना गर्छन् पतिलाई हटाउनुहोस्, तर त्यो त्यति सजिलो हुँदैन। र त्यहाँ त्यो पोष्टम्यान छ जो सधैं दुई पटक कल गर्दछ।
र म क्लासिक को साथ समाप्त जुल्स भेर्न, the क्लासिक लेखक बराबर उत्कृष्टता। १1876 मा प्रकाशित, त्यहाँ धेरै हुन सक्दैन जुन यस गहन कथा पढ्दैनन्। tsar को प्रसिद्ध, बहादुर र निडर कुरियर मिगुएल स्ट्रोगोफ। वा तपाईंले आफ्नो धेरै फिल्म अनुकूलनहरू मध्ये एक देख्नुभएन, सबैभन्दा प्रसिद्ध, सन् १, 1956 बाट।
हामीले सबै यता यात्रा गर्यौं मस्कोदेखि इर्कुत्स्क, टाटर आक्रमणको बीचमा, क्रसिंग साइबेरिया गद्दारको योजनाको बारेमा जारको भाईलाई नोटिस मेल पठाउन ओगारेफ। र हामी सबैले आफ्नी आमाले पनि ध्यान नदिने प्रयास गरेका छौं, जसरी हामीले नाडियाप्रति आफ्नो भावना लुकाउनुपर्‍यो र भय terrible्कर यातना सहनुपर्‍यो।
Es पढनै पर्नी अब र सँधै।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » सबै युगबाट literary साहित्यिक पोस्टमेन सम्झन
के तपाइँ स्टार्टअप iClassics थाहा छ?